ကာတွန်းရုပ်ပြ စာအုပ် ထုတ်ကြမယ် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ပို့စ် 45 ခုအတွက် 395 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဆော့ဝဲရီဗျူး (software review) ပေါ့နော်။ ကင်မရာတစ်လုံးရပြီး လက်တဲ့စမ်း ဟိုလျောက်ရိုက်၊ ဒီလျောက်ရိုက်နေသူတွေ အကြိုက်ပေါ့။ ကျနော့် ဆိုနီ ကင်မရာလေးဆို ပျက်သာပျက်သွားကော..အနားကို မရခဲ့ရှာဘူး။ တွေ့သမျှချိန်ရိုက်နေတဲ့ point and shoot အော်တိုကင်မရာမဲန်းကြီးကိုး ခင်ဗျ။ ဘေးအိမ်က ကလေး မွေးနေ့လည်း ဟက်ပီးဘတ်သ်ဒေး လက်ခုပ်ဝိုင်းတီးပြီး ရိုက်ပေးလိုက်တာပဲ။ အိမ်က သောင်းကျန်းသူတွေ တိရိစ္ဆာန်ရုံပို့လည်း တွေ့ကရာ အကောင်နဲ့ တွဲပြီး အကုန်ရိုက်တာပဲ။ ရိုက်တော့ ဘာဖြစ်လာသလဲ ဆိုရင် လက်ရာတက်လာတယ်ပေါ့ဗျာ (ဝင် ကြွားပါလိုက်သေးသည်းD ) ရောသွားပြီ။ ပြောချင်တာက ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ များလာတယ်ပေါ့။ သူများပုံတွေလေ...။ ကျနော့်ပုံလား ဘယ်ရှိမလဲ။ ကင်မရာမဲန်းမှာ ကိုယ့်ဓာတ်ပုံကိုယ် ရိုက်ခွင့်မရဘူးလေ။ ဓာတ်ပုံမစားတာလည်း ပါတယ်။ ပြောရင်းနဲ့ ထပ် ဘေးချော်သွားပြန်ပြီ။ ပြောချင်တာက ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ များလာတယ်ပေါ့။
ပုံတွေများလာတော့ ဒီအတိုင်း ဓာတ်ပုံကူးကူးနေရတာ ငြီးငွေ့လာတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါနဲ့ အစမ်းထွင်တာပေါ့။ ဓာတ်ပုံလေးတွေ စုပြီး ကာတွန်း၊ ရုပ်ပြ အယ်လ်ဘမ်လေးလို လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား၊ ပြက္ခဒိန်လေးနဲ့ တွဲပြီး ထုတ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား...စမ်းကြည့်တာပေါ့။ အဲတာနဲ့ လက်လှမ်းမှီရာ (မရမက) လိုက်ရှာတော့ ကာတွန်း၊ ရုပ်ပြလုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလေး သွားတွေ့တယ်ခင်ဗျ။ မိတ်ဆွေတို့လည်း ကင်မရာရှိရင် စမ်းကြည့်လို့ ရတယ်။ (အဲ...စကားမစပ်..ရန်ကုန်မှာ ကင်မရာ ဂျပန်ကျ? တွေ ဈေးတော်တော်ပေါတယ်နော်း ၂သောင်းနဲ့ တစ်လုံးရတယ်။)
Comic Life တဲ့ Plasq က ထုတ်တာလေ
အဲ့ဆော့ဝဲသာ ရှိရင် ကာတွန်းရုပ်ပြထုတ်ဘို့ ဘာလိုမလဲ။ ဓာတ်ပုံတွေရယ် ဒီဓာတ်ပုံတွေပေါ်မှာ ဆက်စပ်တဲ့ ဇတ်ညွှန်းလေးပဲ လိုမယ်။ ကျန်တာက ကလိကြည့်ဘို့ပဲ ဒါက ကိုယ့်အပိုင်း။ တန်ဘိုးက ၂၉.၉၅ဒေါ်လာတဲ့။ ကျနော် ရှာကြံ ဆွဲချထားတာလေးတော့ ရှိတယ်။ လိုချင်ရင် ဗမာလိုရေးပြီး လက်တို့လိုက်။ ၁၀မက်ကျော်ကျော်လေး။ ဒီမှာတော့ ငြိမှာစိုးလို့ အတက်မတွဲတော့ဘူး။
အောက်မှာ နမူနာအဖြစ် မေလကုန်တုန်းက အိခိဂျောတို့ မာဏဝဘေရီအဖွဲ့ ရေသွားလှူစဉ်က တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပေးထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို ကာယကံရှင်များထံခွင့်တောင်းပြီး နမူနာ လုပ်ပြထားပါတယ်။ အားလုံး ၄ မျက်နှာတည်း။ ကျန်တာတွေက လုပ်နည်းကို Tutorial အဖြစ် gif နဲ့ လှုပ်ပြထားတာပါ..
IMAGES are courtesy of မာဏဝဘေရီ and respective persons
ဇာတ်ညွှန်းကတော့ ညီလေး ကိုလွှမ်းမိုးထက် တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ကို အခြေခံထားပါတယ်။ အချက်အလက်များကို RFM core-member မသိဂီမှ စစ်ဆေးပေးပါတယ်။
မိုက်တယ်နော်...အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ကလေး မွေးနေ့မှာ ဒီလို ထုတ်ပေးလိုက်ရင် သူတို့ ဘယ်လောက်ပျော်လိုက်မလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
အောက်ကတော့ ကျူတိုရီယယ်ပေါ့။ ပုံတွေကို ဆိုဒ်သိပ်မချုံ့ထားတော့ အတက်တော့ နှေးနေမယ်..။ ကွန်ပေါ်မူတည်မှာပေါ့လေ...။
စာမျက်နှာတစ်ခု ဒီလိုယူပါ။ လိုသလို အကွက်တွေ ချပါ။
ဒါက Caption (ခေါင်းစည်း) ထဲ့ပုံ
ဒါက ခေါင်းစည်းကို ညှိတာ
ဒါက အကွက်ထဲ ပုံထည့်တာ
ဒါက စကားပြောတွေ၊ အော်တာတွေ။ အတွေးတွေ ထည့်တာ (Call-out)
ဂလောက်ဆို လုပ်နည်းက တီးခေါက်မိပီပေါ့။ အသေးစိတ်ညှိချင်ရင် Details သာ ဖွင့်ကြည့်ဗျ..။ ညှိလို့ရတယ်။
လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ရလဒ်ကို Image နဲ့ Export သိမ်းလို့ ရတယ်။
တစ်ခုပဲ.. ကျနော် လက်ရှိရထားတဲ့ ဗားရှင်းက မူဗွီ Export တော့ အဆင်မပြေဘူး။ စမ်းချင်ရင် လက်သာတို့လိုက် လင့်ပေးမယ်နော်း။ ဒီပို့စ်လေးကို မှတ်မှတ်ရရ ဒီနေရာမှာ သိမ်းထားလေရဲ့..။
အောက်ပါအသင်းဝင် 19 ဦးတို့မှ Lu Zein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, ယွန်းယွန်း, ရုပ်ဆိုး, သန့်ဇင်ဌေး, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, ဖြိုးယံလေး, aungphyo, bobochanmyae, bonge, Chee buu lay, hellboy, ko myo, kyawminkhoung, KznT, phoetharlay, phyomyintthein, soehtetpaing, tu tu
Lu Zein ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Visit Lu Zein's homepage!
Find More Posts by Lu Zein
26-08-2010, 06:45 AM
ပြန်စာ - ကာတွန်းရုပ်ပြ စာအုပ် ထုတ်ကြမယ်
Originally Posted by ဧးသိမ်း
အဲလို gif ပုံလေးတွေ ကို ဘယ်လိုလုပ်လည်း ပြောပြပေးပါဦး.ကျတော် သိချင်လို့ပါ
ပြောပြပေးပါလား ပုံလေး တွေ နဲ့ ပေါ့ သိချင်လို့ပါ
Last edited by tu tu; 26-08-2010 at 08:12 AM.. Reason: edit quote
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
21-09-2010, 08:53 PM
ပို့စ် 1 ခုအတွက်6ဦးမှကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ Chee buu lay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ရုပ်ဆိုး, bodavid20, bonge, ko myo, KznT, tu tu
Chee buu lay ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Chee buu lay
23-09-2010, 04:52 PM
ဝင်ဖြေပေးတဲ့ Chee Buu Lay ကို လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီလို capture လုပ်ဘို့ အတွက် Screen Capture ဆော့ဝဲ တစ်ခုခု သုံးလိုက်ရုံနဲ့ ရပါတယ်။
ကျနော် သုံးလိုက်တာကတော့ ...
ပုံသေတွေ ဖမ်းဘို့အတွက် Snagit ပါ
ပုံရှင်တွေ ဖမ်းဘို့ကတော့ Camtasia Studio ပါပဲ..။
ဒီဆော့ဝဲတွေ မြန်မာမိသားစု ဖိုရမ်မှာလည်း ရှိနေပါတယ်..
Camtasia အတွက်ကတော့ အောက်ပါ စာမျက်နှာများကို ရှုပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ Lu Zein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, ရုပ်ဆိုး, ငြိမ်းချမ်း, bonge, ko myo, tu tu
24-09-2010, 12:50 AM
ပို့စ် 13 ခုအတွက် 28 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုဧးသိမ်း ကျနော်ကို အဲ့လို ရုပ်ပြလေး လုပ်တဲ့ စော့လ်ဝဲလေး အဆင်ပြေရင် တင်ပေးပါလားဗျ။
မိသားစုဝင် အားလုံးလဲ အသုံးပြုလို့ရအောင်ပါ။ အစ်ကို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတရ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မောင်နိုင်လင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, Lu Zein
Find More Posts by မောင်နိုင်လင်း
24-09-2010, 09:40 AM
ကျနော် Mediafire လင့်ကို မျှပါမယ်။ ဝင်ယူလိုက်ပါ ခင်ဗျာ..
အင်စတောလုပ်ပီးရင် ပက်ခ်ျလုပ်ပီး သုံးကြည့်ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ Lu Zein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, ရုပ်ဆိုး, ငြိမ်းချမ်း, daya, phoetharlay, swannyee, thurein, tu tu
knowledge, software guide, software howto
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 11:54 AM